Tallaalka Moderna COVID-19 ayaa laga joojiyay Japan kadib laba dhimasho
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Jaban ee Japan » Tallaalka Moderna COVID-19 ayaa laga joojiyay Japan kadib laba dhimasho
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • Wararka Jaban ee Japan • News • Ammaanka • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan
Wasaaradda caafimaadka ee Japan ayaa xaqiijisay in laba qof oo la tallaalay iyaga oo isticmaalaya qiyaaso ka yimid dufcadda ay dhinteen.
Walxo shisheeye ayaa laga helay tiro dufcado tallaal ah.
Dowladda Japan ayaa ogaatay wasakheynta dhammaadka usbuuca.
Faddarayntu waxay sabab u noqon kartaa cilad xagga wax -soo -saarka ah oo ku timaadda mid ka mid ah khadadka wax -soo -saarka, ayay tiri Moderna.
Dowladda Japan ayaa joojisay adeegsiga tallaalka Moderna COVID-19, ka dib geerida laba qof oo dhimatay ka dib markii laga helay tallaal waxa ay saraakiisha Japan ku sheegeen dufcado 'faddaraysan'.
Malaayiin qiyaasood oo ah Moderna COVID-19 ayaa la hakiyay kadib markii walxo shisheeye laga helay tiro dufcado ah.
Saraakiisha caafimaadka Japan ayaa helay sumowga usbuuca dhammaadkiisa qeyb ka mid ah Casri ah Tallaalka COVID-19 ee degmada Gunma, oo u dhow Tokyo, taasoo ku qasbeysa saraakiisha inay si ku meel gaar ah u hakiyaan tallaalka.
Go'aanka ah in la hakiyo wadar ahaan 2.6 milyan oo qiyaasood Tallaalka Moderna ayaa timid kadib markii 1.63 milyan oo xabbadood la joojiyay usbuucii hore ka dib markii la helay wasakhda qaar ka mid ah dhalooyinka ku jira dufcad la geeyay in ka badan 860 xarumood oo tallaal oo dalka oo dhan ah.
In kasta oo aan la xaqiijin halka ay ka timid faddarayntu, haddana Moderna iyo shirkadda dawooyinka ee Rovi, oo soo saarta tallaallada Moderna, waxay sheegeen inay sabab u noqon karto cilad xagga wax -soo -saarka ah oo ka timaadda mid ka mid ah khadadka wax -soo -saarka, halkii ay ka ahaan lahayd wax kale oo khuseeya.
JapanWasaaradda caafimaadka ayaa xaqiijisay in laba qof oo la tallaalay iyada oo la adeegsanayo qiyaaso ka yimid dufcadda ay dhinteen. Si kastaba ha ahaatee, sababta geerida labada kiisba baadhitaan ayaa ku socda waxayna saraakiishu ku andacoonayaan inaan weli la xaqiijin wax welwel xagga ammaanka ah. Bayaan, Moderna iyo qaybiyaha Japan Takeda waxay ku sheegeen "ma hayno wax caddeyn ah in geeridaan ay sababtay tallaalka Moderna COVID-19."
Gunma hadda waa maamulkii toddobaad ee Jabaan ee soo saara wasakheynta qiyaasta tallaalka Moderna, ka dib dhacdooyin la mid ah Aichi, Gifu, Ibaraki, Okinawa, Saitama iyo Tokyo. Waxay ku soo beegmaysaa iyadoo Japan ay la dagaallameyso kiisas badan oo COVID-19 ah oo ku dhawaad ​​kala bar gobollada dalka ku riday xaalad degdeg ah.
Tan iyo bilowgii masiibada, Japan waxay diiwaangelisay 1.38 milyan oo kiis oo la xaqiijiyey oo ah COVID-19 iyo 15,797 oo u dhintay fayraska. Illaa iyo hadda, mas'uuliyiinta Japan ayaa maamulay 118,310,106 qiyaasood oo ah tallaalka COVID-19.